Fisafidianana lohahevitra Wordpress izay misy ny fironana amin'ny Internet 2016 | Famoronana an-tserasera
Fisafidianana lohahevitra WordPress izay misy ny fironana amin'ny Internet amin'ny taona 2016
Fran Marin | | Famolavolana tranonkala, lohahevitra
Indraindray izahay dia nanao lahatsoratra miresaka ny fironana nanjaka nandritra ny 2015 tamin'ny famolavolana tranonkala (ohatra). SAINGY Inona avy ireo fironana mandritra ity taona ity? Azo antoka fa tsy dia misy fiovana be loatra: ny fiasa toy ny laza malaza amin'ny horonan-tsary, ny fampiasana paralaks, ny endrika horonana ary ny endrika fisaka dia hiparitaka ary hiseho amin'ny tranokala isan-karazany: Sekoly an-tserasera, pejin'orinasa, orinasa isan-karazany, bilaogy ary Gazety ...
Avy eo avelako lohahevitra mahaliana kokoa ho an'ny WordPress ianao izay manana ireo toetra ireo ka ho mora ampiasaina hanombohany ny taona vaovao.
Kreate - Lohahevitra manokana ho an'ny orinasa mamorona
Fijinjana - Lohahevitra WooCommerce multipurpose
Harvest dia lohahevitra eCommerce mifototra amin'ny plugin WooCommerce WordPress. Ity lohahevitra ity dia mety amin'ny kinova finday, fanaka, kojakoja an-trano, lakozia, elektronika, galerie kanto, dokotera, fitaovana, akanjo famolavolana lamaody, sakafo, firavaka, fivarotana hatsaran-tarehy, famantaranandro ary trano fitehirizam-bola maro karazana. Izy io koa no lohahevitra marobe azo ampiasaina amin'ny karazana fivarotana an-tserasera.
Mega - Lohahevitra WordPress Creative multi-tanjona
Lohahevitra kanto, minimalista ary mijery matihanina. Iray amin'ireo mampiavaka azy indrindra ny manohana kinova retina izay hahatonga ny tranokala ho tsara tarehy amin'ny fitaovana toy ny Iphone, iPad, MacBook Pro retina ...
Quark - Lohahevitra eCommerce vokatra tokana
Izy io dia misy ny extension extension Visual Media Composer sy ny safidy hampidirina ny lisitra mirotsaka, menus mega, ary hamboarina amin'ny fampisehoana avo lenta toa ny MacBook Pro Retina, iPhone, iPads, ary ny endri-javatra mandroso.
Polar - Lohahevitra WordPress Creative multi-tanjona
Izy io dia lohahevitra mamorona sy marolafy namboarina teo ambonin'ny fototry ny famoronana, faharanitan-tsaina ary famolavolana voadio. Natao indrindra ho an'ny orinasa, portfolio, e-varotra, fampiantranoana, toeram-pitsaboana, tranokala manokana ary hevitra hafa mifandraika amin'ny tontolon'ny Internet matihanina.
Paris - Lohahevitra WordPress misy tanjona maro
Paris dia miorina amin'ny Bootstrap. Ity fonosana iray manontolo ity dia misy ny plugin Revolution Slider, Visual Composer ary Ultimate Addons izay mamela ny fanaingoana tsy manam-petra, ny fanohanana ny menus Mega ary ny fampidirana ny endrika WooCommerce feno, ny plugin Cube Portofolio ary ny safidy typographic miaraka amin'ny katalaogin'ny fonosana maherin'ny 600 an'ny Google.
ZurApp - Theme Showcase Multiconcept App
Ity lohahevitra ity dia manana interface telo azo isafidianana. Izy io koa dia ahitana takelaka safidy matanjaka ao amin'ny lohahevitra izay manome anao ny fahalalahana hahazoana ny fomba irina. Manolotra fahamoranana sy fahamendrehana izy io raha ny fanovana ny hatsaran-tarehinao amin'ny alàlan'ny safidin'ny safidy feno. Ity lohahevitra ity dia misy ny Visual Page Builder sy ny fehezan-dalàna fohy azo amboarina. Ho fanampin'izany, ny fametrahana tsindry iray monja azy io dia mahatonga ny fizotrany hiova sy hivaingana tanteraka. ZurApp dia manome fahalalahana betsaka rehefa manangana bilaogy, portfolio, gallery ary maro hafa.
Harika | Lohahevitra WordPress Blog madio manokana
Harika dia tsara tarehy, tsotra, retina ary mora amboarina. Izy io dia natsangana tamin'ny fahatsapana hatsarana avo. Harika dia tonga amin'ny famolavolana typografika lehibe amin'ny alàlan'ny default, na izany aza dia manome antsika ny fahaizana manokana azy io. Izany dia manome mpamaky amin'ny fizotrany mamaky aina.
Upside - lohahevitra WordPress misy tanjona maro
Ny Upside dia misy ny maodely multipurpose farany ary natao ho an'ny karazana tranokala fandraharahana, tonga lafatra ho an'ny orinasa madinidinika. Ity lohahevitra ity dia manamora ny fitantanana hetsika, ny fitantanana fampianarana isan-tsokajy, ny fikarohana amin'ny lohahevitra, ny fivarotana fampianarana an-tserasera, ary ny fitantanana mpampianatra sy ny mpiasa amin'ny alàlan'ny serivisy farany.
Ny lohahevitra Noraure WooCommerce WordPress dia natao manokana ho an'ny fivarotana sy tranokala eCommerce. Ity dia temotra WooCommerce WordPress tena marobe. Noraure no lohahevitra mety aminao raha mitady ny lohahevitra ecommerce marobe izay afaka mitantana ny zavatra rehetra atsipinaoo io. Izy io dia miaraka amina endrika endrika mahasarika maso izay hisarika ny mason'izay mitsidika ny tranonkalanao avy hatrany.
Fanabeazana WordPress Theme | Education WP
Lohahevitra WordPress fanabeazana - WP Education dia fananganana manokana ho an'ny tranokala System Management and Learning Management mahomby. Iza no mipetraka amin'ny fananganana LMS miaraka amin'ny lohahevitra eLearning WP teo aloha, ny Education WP no taranaka manaraka ary iray amin'ireo lohahevitra fampianarana WordPress tsara indrindra, izay misy ny herin'ny eLearning WP ary misy UI / UX tsara kokoa.
Zero - Lohahevitra WordPress Creative Corporate
Zero dia Theme Creative Responsive WordPress ho an'ny orinasa, bilaogy, magazine. Ny lohahevitra dia miaraka amina tranokala efa voaorina 8 nahavariana, ny tranokala efa voaorina dia samy manana ny endriny sy ny endriny. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny sehatra ecommerce WordPress tsara indrindra - WooCommerce.
Tavern - Lohahevitra WooCommerce WordPress multipurpose
Taberna dia lohahevitra maoderina, madio sy matihanina WordPress multigpose, mamaly tanteraka izy io, ary toa manaitra amin'ny karazana efijery sy fitaovana rehetra koa. Namboarina ho an'ny lamaody, nomerika, lalao, sakafo, fitaovana elektronika, fivarotana kojakoja ao an-trano sy departemanta maro hafa eo amin'ny tontolon'ny eCommerce. Nampiditra layout maromaro ho an'ny pejy fandraisana, pejy bilaogy izahay hanome anao safidy tsara indrindra amin'ny fanamboarana.
Ri Ghoster - Lohahevitra WordPress Creative Multipurpose
Ri Ghoster dia lohahevitra WordPress madio, maoderina ary mamaly miaraka amina endrika madio sy matihanina izay manome ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny orinasa, portfolio, bilaogy ary pejy marketing.
Bow - Lohahevitra Woocommerce mamaly
Bow dia lohahevitra WordPress mandray andraikitra feno amin'ny fivarotana rehetra, mampiasa Bootstrap izy ary natsangana tamin'ny alàlan'ny endri-tsoratra HTML5 sy CSS3 farany teo, lohahevitra azo ovaina be dia be miaraka amin'ny fantsona manokana, METABOX manokana ary ny safidin'ny lohahevitra. Mamela anao hanao fanaingoana tsy fantatra na inona na inona momba ny HTML na CSS.
NRGika dia portfolio vaovao WordPress Theme ho an'ny masoivoho mpamorona sy mpiasa tsy miankina. Ny mpamorona sary, mpanao sary, mpaka sary na karazana famoronana rehetra izao dia afaka mamorona portfolio haingana sy mora hanehoana ny sanganasan'izy ireo amin'ny fomba miavaka sy mamorona. Azonao atao koa ny mamorona tranokala na tranokala tranokala anao mora foana.
The Core - Lohahevitra WordPress misy tanjona maro
Ny Core dia lohahevitra goavambe WordPress izay misy lohahevitra 10 samihafa ao anatiny (miaraka amin'ny ho avy tsy ho ela). Topazo maso ny fampisehoana video etsy ambany raha mila famintinana ireo fiasa amin'ny lohahevitray WordPress manokana mandraka androany.
Manangana | Lohahevitra WordPress misy tanjona maro
ConstRE no lohahevitra WordPress lehibe indrindra. Madio izy io, malefaka be ary mamaly, misy safidy marobe izay miaraka amin'ny tranokalanao any an-danitra. ConstRE dia mihoatra ny lohahevitra WordPress ihany, izay lohahevitra tsara indrindra raisintsika. Ny tontonana safidy efa nandroso ary hisintona ary milatsaka fitaovana famoronana misy expanses manta lehibe ao anatiny manome fahafaha-manao tsy voafetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » lohahevitra » Fisafidianana lohahevitra WordPress izay misy ny fironana amin'ny Internet amin'ny taona 2016
Ny New York Public Library dia hamoaka sary, carte postales ary bebe kokoa maherin'ny 180.000